Iran: Hetsika Sy Sarin’ny Mpikatroka Maitso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jona 2017 4:38 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Português, Italiano, Español, عربي, English
(Marihina fa tamin'ny 08 Jona 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Loharanom-baovao lehibe ho fampahafantarana ny olana sy ny zava-tsarotra mikasika ny natiora sy ny tontolo iainana ao Iran ny bilaogy maitso. Mandray anjara mavitrika amin'ny fanentanana ireo bilaogera maitso mba hiarovana ny natiora sy ny biby. Namoaka lahatsoratra, tantara ary sary izy ireo, ary nikarakara fihaonambe sy fihetsiketsehana. Ato amin'ity lahatsoratra ity, ho hitantsika ny fikatrohana maitso ao Iran amin'ny alalan'ny fomba fijerin'ireo bilaogera tamin'ny herintaona.
Ireto misy sary tamin'ny hetsika zavakanto ara-tontolo iainana ho fanoherana ny fandringanana ny natiora sy ny fihazana ny biby.
Ny Zavakanto sy ny Tontolo Iainana
Namoaka [fa] sary maromaro avy amin'ny fetiben'ny zavakanto vao haingana i Mojgan Jamshidi tao an-tanàndehibe avaratr'i Noshahr. Nalain'i Ahmad Nadalyan sy Raheleh Zomorodnya ny sary:
Nanao hetsi-panoherana manohitra ny fanidina ny biby ao anaty trano makarakara vy ny sasany.
na mihaza azy ireo:
Namoaka [fa] ny sarin'ireo mpanao fihetsiketsehana, izay nanohitra ny fisian'ny fampisehoan'ny [cirque] biby Italiana tao Tehran tamin'ny volana Janoary i Hamnahad . Nilanja ny sarin'ny biby maro mifatotra izy ireo miaraka amin'ny teny faneva hoe “Tiavo amin'ny fahafahana izahay fa tsy amin'ny rojo vy” na “Tsy maha-te-hiaina ny teraka ao anaty fahababoana.”
Nanoratra [fa] momba ny fihaonambe mikasika ny fananganana ny tohodrano lehibe, ny vokany sy ny vahaolana hafa i Mohammad Darvish tao amin'ny bilaoginy. Iray tamin'ireo nandray fitenenana ihany koa izy .
Nampiseho [fa] ny voka-dratsin'ny tohodrano iray ao Iran i Jamshidi , izay ahitana ny farihy Urumiyeh ao avaratra andrefana lasa farihy masira ka nahafaty ny biby .
Nampiseho [fa] olona niara-namboly hazo hisian'ny hoavy tsaratsara kokoa i Grey Wolf.